Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Thailand War Deg Deg Ah » Thailand waxay dhaqan galisay 14 maalmood oo duulimaadyada gudaha laga mamnuucayo
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • News • Thailand War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
Mamnuucidda Duulimaadka Thailand
Hat Yai Airport oo ku yaal gobolka Songkhla ee Thailand waa mid madhan oo xasilloon. Calaamadaha kaliya ee nolosha aadanaha waa ilaalada amniga ee heeganka ku jira.
Thailand ayaa dejisay 14 maalmood oo duulimaad gudaha ah oo loogu talagalay gobollada ku yaal gobollada iyo aagagga guduud-madow.
Xayiraadda ayaa socon doonta laga bilaabo 23-ka July illaa 2-da Ogosto 2021, ugu yaraan.
Badanaa kiisaska cusubi waxay ku lug leeyihiin noocyada kala duwan ee 'COVID-19 Delta', iyadoo tallaalku uusan xawaare ku socon doonin si loo abuuro difaac xoolaad.
Si loo xakameeyo cudurka loo yaqaan 'COVID-19 coronavirus', xayiraadda duulimaadka ayaa lagu dhawaaqay isla markaana koontaroolo adag ayaa isla markiiba dhaqan galaya. Isbaarooyinka iyo baaritaanka waxay ku yaalliin safarka u dhexeeya gobollada aagga-guduudka iyo meelaha kale.
Xaaladaha cusub ee COVID-19 waxaa laga duubay maalin walba gobolka koonfurta ee Songkhla iyadoo koox cusub laga helayo suuqa weyn ee Sapsin ee degmada Muang. Xafiiska dawlada hoose ee Nakhon Songkhla ayaa xidhay suuqa 7 maalmood laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 22 julaay ilaa 28.
Maamulka Dalxiiska ee Thailand (TAT) waxay cusbooneysiisay wareegii ugu dambeeyay ee xayiraadaha COVID-19 ee lagu dhawaaqay 13 Meelood ee Ugu Badan iyo Xakamaynta Adag ama gobollada aagga guduud-madow.
Xaaladaha cusubi badanaa waxay ku lug leeyihiin Delta Delta, gaar ahaan kooxaha nugul (da'da 60 + iyo kuwa qaba cudurrada asaasiga ah), iyadoo infekshannada badankood ay ka yimaadaan guriga qoyska dhexdiisa. In kasta oo la isku dayey in la dedejiyo tallaalka, haddana weli waxaa loo baahan yahay in la dhiso difaac ka mid ah daaqa.
Xarunta Maamulka COVID-19 Xaaladda Maamulka (CCSA) waxay sidoo kale ku dartay Ayutthaya, Chachoengsao iyo Chon Buri aagga guduudka-guduudka taasoo ka dhigeysa tirada gobollada 13 marka lagu daro Bangkok, iyo 5-da gobol ee ku xeeran - Nakhon Pathom, Nonthaburi, Pathum Thani , Samut Prakan, iyo Samut Sakhon - iyo 4 Gobol oo Koonfurta Thai ah - Narathiwat, Pattani, Songkhla, iyo Yala.
Gaadiidka dadweynaha waxaa loo oggol yahay inay ku shaqeeyaan kaliya boqolkiiba 50 awoodda fadhiga waana inay adeegsadaan tallaabooyinka kala fogaynta bulshada. Mas'uuliyiinta qaraabada ah waa inay hubiyaan inay jiraan adeegyo gaadiid oo ku filan, gaar ahaan dadka leh ballamaha tallaalka.
Huteeladu way furmi karaan saacadihii caadiga ahaa, laakiin looma oggola inay qabtaan wax shirar ah, aqoon-isweydaarsiyo, ama xaflado. Dukaamada ku habboon iyo suuqyada cusub waxaa loo oggol yahay inay furnaadaan illaa 2000 saacadood. Dhamaan dukaamada 24-ka saacadood ee sahlanaanta waa inay xirnaadaan habeenki inta udhaxeysa 2000-0400 saacadood.
Waxaa la faray in la xiro 23-ka Luulyo ilaa Ogosto 2 - ama ilaa ogeysiis dheeri ah - waa garoomo isboorti, jardiinooyin dadweyne iyo beero dhir leh, dhammaan noocyada kala duwan ee tartamada, xarumaha bandhigga, xarumaha shirarka, goobaha waxqabadka dadweynaha, xarumaha waxbarashada iyo qolalka farshaxanka, maktabadaha, matxafyada. , jardiinooyinka taariikhiga ah iyo goobaha qadiimiga ah, xarumaha xanaanada carruurta, goobaha qurxinta, timo jarayaasha, dukaamada manicure iyo tattoo, iyo barkadaha dabaasha.
Makhaayadaha iyo makhaayadaha ayaa loo oggol yahay inay bixiyaan adeegyo ka-qaadis ah oo keliya illaa 2000 saacadood. Bakhaarada waaxda, xarumaha ganacsiga, iyo xarumaha bulshada waxaa loo oggol yahay inay furnaadaan illaa 2000 saacadood waxaana kaliya loo oggol yahay dukaamada waaweyn, farmashiyaasha iyo agabka caafimaadka, iyo xarumaha talaalka.
Bandowga-habeenkii waa mid aan isbeddelin inta u dhexeysa 2100-0400 saacadood. Si kastaba ha noqotee, inta lagu jiro mudada 7-ka saacadood ee habeen kasta, dadka waxaa laga codsanayaa inay guryahooda joogaan oo kaliya ay banaanka u baxaan haddii loo baahdo.
Waxaa loo oggol yahay inuu u furnaado talaabooyinka adag ee xakamaynta cudurrada waa isbitaalada, xarumaha caafimaadka, rugaha caafimaadka, farmashiyaasha, dukaamada, warshadaha, bangiyada iyo adeegyada maaliyadeed, ATM-yada, adeegyada isgaarsiinta, boostada iyo adeegyada guud, dukaamada cuntada xayawaanka, qalabka dhismaha iyo dukaamada alaabada dhismaha, dukaamada lagu iibiyo waxyaabaha kaladuwan ee lagama maarmaanka ah, dukaamada gaaska lagu karsado, kaalimaha shidaalka, iyo adeegyada dirida internetka.